Inona no ataontsika - Shenzhen Sunson International Logistics Co., Ltd.
atolotray ny mpanjifanay ny tsara indrindra amin'ny fanatanterahana ny baiko eCommerce avy any Shina ka manerantany…
Ny fanatanterahana dia mihoatra ny baiko fandefasana amin'ny mpanjifanao. Ny momba ny famoronana traikefa fividianana kilasy voalohany izay mamela fahatsapana maharitra, izay miantoka ny fiverenan'ny mpanjifanao hatrany hatrany hatrany. Eo no ahafahantsika manampy!
Experience:Izahay dia manana traikefa amin'ny fametrahana ireo dingana ilaina amin'ny fanatanterahana farany anao amin'ny torolàlana B2B sy B2C. Fantatray ny fomba fanao tsara indrindra eto amin'ity sehatra ity izay mety hahasoa anao. Manana fomba fiasa mahomby sy fitaovana ary mpiasa voaofana tsara izahay mba hikirakira azy io am-pilaminana, amin'ny fomba mandaitra ary amin'ny fomba manome toky indrindra. Ny fotodrafitrasa misy anay dia avo lenta indrindra misy fikojakojana tsara indrindra matetika miaraka amin'ny fizahana toerana, fanaraha-maso kalitao ary fanaraha-maso. Ny ekipanay dia voaofana tsara hitandrina ireo fenitra ireo amin'ny fotoana rehetra.
System:Manolotra vahaolana mora vidy sy lafo vidy izahay amin'ny fitadidiana fotoana fitantanana mahomby. Amin'ny alàlan'ny fananganana ny fizotrantsika sy ny serivisinay manodidina ny orinasanao, afaka manangona fotoana, vola ary ny zava-drehetra izahay, dia ho voalamina soa aman-tsara ary maimaim-poana. Ny rafitray ato an-trano dia natao ho an'ny mpanjifa ary mora sy mora ho an'ny sambo mpivarotra an-tserasera, mamela anao hitantana ny magazay sy ny baiko anao lavitra. Azonao atao ny manara-maso foana ny tahirinao na aiza na aiza, na oviana na oviana, ary tsy misy ahiana ny fandoavana tafahoatra. Ny interface interface-based-n'ny Sunson dia tafiditra tanteraka amin'ny fiasan-dry zareo sy ny fonosana farany. Mampiasa ny haitao barcode amin'ny sehatra rehetra izahay.
Storage:Manana trano fitahirizana 10.000 metatra toradroa mahery any Shenzhen sy Guangzhou any amin'ny faritanin'i Guangdong, any Sina izahay. Ny vokatra dia tehirizina amin'ny fomba tena voarindra. Izahay amin'ny fampiasana mahomby ny trano fitahirizana trano fitehirizana manampy amin'ny fanamorana ny fikirakirana. Ny entana lafo vidy dia tazonina misaraka. Ny trano fanatobiana entana misy fitaovana ihany koa miaraka amin'ny rafitra famonoana afo ary koa fanaraha-maso mandritra ny 24 ora. Manana fidirana voafehy ihany koa izahay hiantohana ny fiarovana ny vokatrao.
trano fanatobiana entana:Ny trano fanatobiana entana any Shina dia ahafahanao manararaotra ny vidin'ny fandidiana ambany sy ny safidy fandefasana maro. Mety hisy ihany koa ny tombony azo avy amin'ny fihenan'ny hetra amin'ny varotra sy ny fisorohana ny adidy. Afaka manampy amin'ny fifandraisana amin'ireo mpamatsy sinoa anao koa izahay.
Haka-ary-Pack:Izahay dia mitantana kaomandy 30.000+ isan'andro ary mahazaka baiko 100 000+ mandritra ny vanim-potoana fara tampony. Manana fotoana fanodinana haingana be izahay. Amin'ny ankapobeny, ny baiko natolotra teo anelanelan'ny 10:00 sy 20:00 dia vonona amin'ny fanangonana ataon'ny mpandefa entana ao anatin'ny 24 ora. Izahay ao anaty pick-and-pack dia mampiasa rafitra voalohany miditra voalohany, koa azo antoka ny mpanjifanao handray ny vokariny amin'ny toe-piainana mety indrindra. Manolotra fitaovana famenoana tsy misy vidiny maimaimpoana izahay ho fiarovana fanampiny amin'ny fahavoazana mandritra ny fandefasana iraisam-pirenena. Mampiasa ny haitao barcode amin'ny sehatra rehetra izahay. Mavesatra ny fonosana mba hahazoana antoka fa marina ny vidin'ny fandefasana. Raha ny marina, ny teknolojia no lakilentsika amin'ny fampihenana ny vidiny, amin'ny fanatsarana ny fahombiazana ary amin'ny fanenanana ny lesoka ataon'ny olombelona.
Fandefasana:Ny fonosana dia namboarina tamin'ny alàlan'ny masininay ary voamarina indroa foana alohan'ny fandefasana azy. Ny fahalalantsika ny fandefasana iraisam-pirenena dia ahafahantsika manangona vola sy fotoana. Hanana ny safidy fandefasana ara-toekarena faran'izay betsaka ianao satria sunson dia mpiara-miasa amin'ireo mpitatitra entana eran'izao tontolo izao toa ny UPS, DHL, EMS, sns ary koa ny serivisy paositra iraisam-pirenena toa ny Netherlands Post, Hong Kong Post, China Post, USPS, Swiss Post , Royal Mail, Belzika Post, sns. Manana serivisy an-tsokosoko ihany koa izahay, izay mifamatotra amin'ireo iraka eoropeanina hikarakara ny fandefasana kilometatra farany. Araraoty ny tahan'ny fandefasana anay ambany izay efa nifampiraharaha tamin'ireto mpampita entana azo antoka ireto! Raha any ivelan'i Shina ianao ary mivarotra ny vokatra vita an-trano any Shina amin'ny tsena manerantany, dia afaka manampy anao amin'ny alàlan'ny fandefasana baiko mivantana avy any Shina amin'ireo mpanjifanao izahay erak'izao tontolo izao.
Clients:Sunson dia manana traikefa goavana amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanjifa vahiny izay ny vokatra dia avy any Shina. Araka ny fantatsika, ny ankamaroan'ny mpivarotra an-tserasera dia avy any ivelany; izahay dia namolavola modely ara-barotra tsy manam-paharoa izay mahazaka ny mpanjifanay lavitra rehetra ary mamela azy ireo hitantana ny zava-drehetra amin'ny Internet. Raha mila fanatanterahana an'io dovetails io ianao amin'ny tsena fivarotana e-varotra anao, dia afaka mifanakalo hevitra aminao izahay handefasana izany dingana izany amin'ny alàlan'ny fampidirana API. Hatao hanamorana ny fitantanana trano fanatobiana entana any Shina avy any ampitan-dranomasina.
Tohano:Manana mpitantana kaonty miteny anglisy mahay izahay; Ny solontenan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa izay notendrena hatrany isaky ny mpanjifa voasoratra anarana mba hanomezana fanohanana namboarina.
Ny serivisy fanatanterahana izay hataonao eto, sunson dia tompon'andraikitra ary voaporofo amin'ny fanoloran-tenanay rehetra. Azonao atao ny manafoana ny fotoana laninao amin'ny fikarakarana ny fizotrany, ny fiofanana ary ny fanaraha-maso ireo mpiasa fandefasana entana raha mifandray aminay ianao. Tsy mora ny manao azy io, ho anao izahay. Ataonay ho anao izany, soa aman-tsara ary mifanaraka amin'ny fotoana. Tsy eo intsony ny ahiahinao. Ny ivon-toeranay dia izay ilainao hampisondrotra ny orinasanao amin'ny sehatra manaraka, izay iray manerantany.
Mamporisika anao izahay hitondra ny varotra ary hikarakara fonosana, fandefasana ho anao izahay. Mifantoka amin'ny zavatra tsara indrindra vitanao fotsiny ianao. Ireo serivisy fanatanterahana ho azonao avy amin'ny sunson dia azo antoka, tompon'andraikitra ary voaporofo tsara indrindra. Hofoananao ny fotoana laninao amin'ny fandraisana mpiasa, ny fampiofanana ary ny fanaraha-maso ireo mpiasa mpandefa entana na manao izany ny tenanao dia tena sarotra ihany koa. Ny ivon-toeranay dia izay ilainao hampisondrotra ny asanao amin'ny sehatra manaraka.